Shilalekha » प्राइम कमर्सियल बैंकले साढे तीन अर्बको ऋणपत्र जारी गर्दै, ब्याज कति ? प्राइम कमर्सियल बैंकले साढे तीन अर्बको ऋणपत्र जारी गर्दै, ब्याज कति ? – Shilalekha
प्राइम कमर्सियल बैंकले साढे तीन अर्बको ऋणपत्र जारी गर्दै, ब्याज कति ?
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १८:११
काठमाडौं । प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेडले फागुन १९ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको छ। सो ऋणपत्रको नाम ‘८।७५ प्रतिशत प्राइम डिबेन्चर २०८५’ रहेको छ।
सो ऋणपत्रको अवधि ८ वर्षको रहेको छ। बैंकले वार्षिक ८।७५ प्रतिशतका दरले हरेक आर्थिक वर्षको प्रथम अर्धवार्षिक र दोस्रो अर्धवार्षिक समाप्त भएपश्चात भुक्तानी गरिने बैंकले जनाएको छ।